Mungashandisa Sei Mafoni Zvakanaka | Mazano Ekubatsira Mhuri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Belize Kriol Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lari Lithuanian Luo Malagasy Malay Malayalam Maya Mongolian Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus)
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Mungashandisa Sei Mafoni Zvakanaka?
Kana foni ikashandiswa zvakanaka zvinogona kubatsira muwanano. Semuenzaniso vamwe varume nemadzimai vanoashandisa kuti vagare vachitaura vese pavanenge vasiri pamwe chete.
“Meseji yekungoti, ‘Ndinokuda’ kana kuti ‘Ndiri kukufunga’ inogona kureva zvakawanda.”—Jonathan.
Kana foni ikasashandiswa zvakanaka zvinogona kukanganisa wanano. Semuenzaniso, vamwe vanongogara vari pafoni, izvo zvinoita kuti vashaye nguva newavakaroorana naye.
“Ndinofunga kuti pamwe pacho murume wangu anotadza kutaura neni nekuti ndinenge ndiri pafoni.”—Julissa.
Vamwe vanofunga kuti vanogona kutaura newavakaroorana naye, uku vari pafoni. Sherry Turkle, uyo anoongorora magariro evanhu akati izvozvo “zvinobva pamafungiro ekuti munhu anogona kuita zvinhu zvakawanda panguva imwe chete.” Vamwe vanofunga kuti kuita zvinhu zvakawanda panguva imwe chete chinhu chinodadisa asi hachisi. Anoti, “kana tikaedza kuita zvinhu zvakawanda panguva imwe chete chimwe chacho hachibudi zvakanaka.” *
“Ndinofarira kutaura nemurume wangu, asi kwete paanenge achiita zvinhu zvakawanda panguva imwe chete. Zvinobva zvaita sekuti haana kana basa neni.”—Sarah.
Pfungwa inokosha ndeiyi: Mashandisiro aunoita foni anogona kubatsira kana kuparadza wanano yenyu.
Ziva zvinhu zvinokosha. Bhaibheri rinoti: ‘Ivai nechokwadi chekuti ndezvipi zvinokosha kupfuura zvimwe.’ (VaFiripi 1:10) Zvibvunze kuti, ‘Foni haisi kutitorera nguva yatiri kufanira kupedza tiri pamwe chete here?’
“Zvinosuwisa kuona murume nemudzimai vakangoti maziso udyu pamafoni, apa vaenda kumbonodyira dyira paresitorendi. Hatifaniri kuitwa varanda vemafoni zvekuti tinobva takanganwa kuti wanano yedu ndiyo inonyanya kukosha.”—Matthew.
Ziva pekugumira. Bhaibheri rinoti: “Rambai makanyatsongwarira kuti musafamba sevanhu vasina kuchenjera asi sevanhu vakachenjera, muchishandisa nguva yenyu nekuchenjera.” (VaEfeso 5:15, 16) Zvibvunze kuti, ‘Pane kuti ndingotarisa meseji yese yese inenge yangopinda, ndinokwanisa here kusarudza nguva yakakodzera yekuzopindura mameseji acho?’
“Ndakaona zvichibatsira kudzima vhoriyumu yefoni yangu kuitira kuti ndizopindura mameseji anenge apinda pane imwe nguva yakakodzera. Kashoma kuti papinde meseji kana kuti email inenge ichida kukurumidzirwa.”—Jonathan.
Kana zvichikwanisika, basa ngariperere kubasa. Bhaibheri rinoti: “Chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho.” (Muparidzi 3:1) Zvibvunze mibvunzo inotevera: ‘Foni yangu iri kuita kuti ndipedzisire ndava kuita zvinhu zvebasa ndiri kumba here? Kana zvakadaro, haisi kukanganisa wanano yangu here? Mumwe wangu anotii nazvo?’
“Mafoni anoita kuti tikwanise kushanda nguva dzese. Ndinotofanira kushanda nesimba kuti ndisarambe ndichitarisa foni yangu uye kutarisa zvinhu zvine chekuita nebasa kana ndiine mudzimai wangu.”—Matthew.
Taura newawakaroorana naye nezvemashandisiro amunoita mafoni. Bhaibheri rinoti: “Mumwe nemumwe ngaarege kuramba achitsvaga zvinobatsira iye chete, asiwo zvinobatsira mumwe.” (1 VaKorinde 10:24) Tauriranai kuti mumwe nemumwe wenyu anoshandisa sei foni yake uye motaura kuti zvii zvinoda kugadziriswa kana zviripo. Unogona kushandisa chikamu chakanzi zvamungakurukura nezvazvo chiri munyaya ino kuti muwane pekutangira.
“Ini nemurume wangu tinonyatsobudirana pachena, uye tinoudzana kana paine ava kunyanya kushandisa foni. Tinoziva kuti izvi zvinogona kukonzera dambudziko, saka tinokoshesa zvinenge zvataurwa nemumwe.”—Danielle.
Pfungwa inokosha ndeiyi: Iva nechokwadi chekuti hauitwe muranda wefoni.
“Nguva yemanheru iyo inogona kushandiswa muchitaura zvaitika muswere wese wezuva inogona kuvhiringidzwa kana vanhu vangova pamafoni. Pane zvinhu zvakawanda muupenyu zvinenge zvichida kuti titaure pane kuti tipedze nguva yedu tingori pamafoni.”—Trista, nemurume wake Georgel.
“Mumwe wako anofanira kupiwa nguva yake yakakwana. Hapamboshayi meseji, email kana kuti zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kuvhurwa. Asi izvozvo zvinogona kumbomira. Kana usingatumire meseji paunenge uchityaira nekuti zvinogona kukonzera tsaona, ungashandisa foni yako here kana ichikanganisa wanano yako?”—Jonathan, nemudzimai wake Katelyn.
Kushandisa kwatinoita mafoni kune zvakuri kubatsira here pakunatsiridza wanano yedu?
Unonzwa sekuti kushandisa kunoita mumwe wako foni kuri kukanganisa wanano yenyu here? Kana zvakadaro, ari kuikanganisa sei?
Unofunga kuti mumwe wako angati kushandisa kwaunoita foni kuri kukanganisa wanano yenyu here? Kana zvakadaro, zvii zvingaita kuti adaro?
Pane here zvikonzero zvinoita kuti ufanire kugara uchipindura mameseji aunenge wagamuchira? Kana zvakadaro, zvinetso zvinogona kuzomuka zvingagadziriswa sei?
Zvii zvamungafanira kugadzirisa panyaya yekushandisa mafoni?
Kudzokorora: Ungashandisa sei foni zvakanaka
Ziva zvinokosha. Usakanganwe kuti wanano yenyu ndiyo inonyanya kukosha.
Ziva pekugumira. Unokwanisa kuva nenguva here yekuzotarisa mameseji pane kungopindura meseji yese yese painongopindira?
Kana zvichiita, basa ngariperere kubasa. Foni inoita kuti ubatike kunyange usiri pabasa, asi zvinoreva here kuti wongogara uchishanda zvinhu zvekubasa pafoni?
Taurirana nemumwe wako nezvemashandisiro amuri kuita mafoni. Kushandisa kwamunoita mafoni kuri kukanganisa sei wanano yenyu? Pane zvinoda kugadziriswa here kana zviripo?
^ ndima 6 Kubva mubhuku rinonzi Reclaiming Conversation—The Power of Talk in a Digital Age.
Murume nemudzimai vanogona kutadza kunyatsokurukura kunyange pavanenge vari vese. Vangaitei kuti vashandise nguva yavo zvakanaka pavanenge vari vese?
Unokwanisa kuita zvinhu zvakawanda panguva imwe chete uye zvese zvichinyatsobuda zvakanaka here?
Maitiro evanhurume nevanhukadzi pakukurukura anosiyana. Kuziva izvi kunogona kukubatsira kuti usakurumidza kugumbuka.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mungashandisa Sei Mafoni Zvakanaka?
ijwhf nyaya 10